Camera နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေကို ဒီီပိုစ့်မှာ စုပြီး ရေးပါ့မယ်။ အလျဉ်းသင့်ရင် သင့်သလို ထပ်ဖြည့်သွားပါ့မယ်။ Sensor Digital Camera ရဲ့ အသက်က ကင်မရာရဲ့ sensor size ပါ။ ကင်မရာရဲ့ lens ကိုဖြုတ်လိုက်ရင် ကင်မရာထဲမှာ တွေ့ရတဲ့ လေးထောင့်ကြီးက camera sensor ပါ။ အဲ့ဒီ sensor size ကို မူတည်ပြီး ကင်မရာတွေကို အမျိုးအစားခွဲကြတာပါ။ အဲ့အကြောင်းကို မပြောခင် အရင်ဆုံး ဖလင်ကို အရင်ပြောရပါလိမ့်မယ်။ အရင် ဖလင်ခေတ်က standard film က 35mm( ကန့််လန့်ဖြတ်တိုင်း) 36 x 24mm ပါ။ Digital ခေတ်ကို ရောက်လာတဲ့ အခါ film နေရာမှာ sensor တွေဖြစ်သွားပါတယ်။ Sensor size က မူလ 35mm film size အတိုင်း ရှိနေတယ်ဆိုရင် အဲ့ ကင်မရာကို Full Frame Cameraလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ Full frame ထက် ၁ ဆခွဲ ငယ်တဲ့ sensor တွေကို crop frame လို့ ခေါ်ပြီး အဲ့ဒီ crop frame sensor ပါတဲ့ camera တွေကို Crop Frame Camera လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Crop frame ကို APS-C လို့လည်း ခေါ်ပါသေးတယ်။ 35mm Full Frame နဲ့ Crop Frame ကြားထဲမှာ APS-H (သူ့ ဆိုဒ်ကတော့ 28.1 x 18.7mm )ဆိုပြီး အရင်က Canon က ထုတ်တဲ့ Sensor လည်း ရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါကိုကျတော့ Canon ရဲ့ 1
iOS အတွက် TT keyboard မှာ features အသစ်တွေ အနေနဲ့ ကော်ပီ ကူးထားတဲ့Zawgyi စာတွေကို Unicode ပြောင်းပေးတဲ့ Converter ပါလာတာနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ unicode စာတွေကို zawgyi ပြောင်းပေးတဲ့ converter ပါလာပါပြီ။ အရင်ကလို Rabbit converter သတ်သတ် ထည့်စရာ မလိုတော့တာပေါ့။ Download TT Keyboard for iOS Keyboard ရဲ့ အပေါ် ဘားလေးမှာ မျက်မှန်ပုံလေးက clipboard converter ပါ။ အရင်ဆုံးဖတ်ချင်တဲ့ zawgyi စာတွေကို copy လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အဲ့ မျက်မှန်လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ ကူးထားတဲ့ စာတွေကို unicode နဲ့ ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်က Unicode သုံးနေပေမယ့်လည်း ဟိုဘက်မှာ zawgyi ပဲ ရှိနေတယ် ဆိုရင် converter နဲ့ပို့လို့ရပါတယ်။ ကိုယ်ရိုက်မယ့်စာ ကို ရိုက်ပြီးတာနဲ့ စောန မျက်မှန်ဘေးက converter icon ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ စာ ကို zawgyi ပြောင်းပေးသွားမှာပါ။
Viber messages (Android) မှာ Zawgyi to Unicode auto converted ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့... အရင်ဆုံး viber app နောက်ဆုံးဗားရှင်း ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ (Playstore မှာ upgrade လုပ်ပါ) ပြီးရင် viber setting မှာ အောက်ကပုံထဲကလို ပြုပြင်ပေးပြီးရင် ဖုန်းကို reboot (ဖုန်းပါဝါပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်တစ်ကြိမ်) ပြုလုပ်ပြီးတာနဲ့ ဘာလာလာ ဒေါင်းပါကြောင်း.... Click Here to Download
By Htet Wai Aung - February 18, 2020
၂၀၂၀ တော့ ရောက်လာပြီ။ ၂၀၁၉ အကုန်မှာစိတ်အချမ်းသာဆုံးကတော့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ယူနီကုဒ်စနစ်ကို ကူးပြောင်းသွားတာပဲ။ တခါတုန်းက ယူနီကုဒ်သုံးရင် ရွာပြင် ထွက်နေရတယ် ဆိုပြီး နာမည်ကြီးခဲ့ပေမယ့် ခုလို တနိုင်ငံလုံး ရွာပြင်ရောက်လာတော့ ဝမ်းသာအဲလဲ ကြိုဆိုရတာပေါ့။ ဟိဟိ။ ခုလို တနိုင်ငံလုံး ယူနီကုဒ်စနစ်ကို ပြောင်းဖို့ ဆိုပြီးတော့ စခဲ့တာတော့ ကြာပြီပေါ့။ ဒါပေမယ့် တကယ့် ပြောင်းရမယ့် migration plan ကိုတော့ ဓါတ်ပုံထဲက လူတွေက ဦးဆောင်ပြီးတော့ ၂၀၁၆ မှာ ရေးခဲ့ ဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။ (ကျွန်တော်က စာစီစာရိုက်ပဲလုပ်တာပါ😬) အဲ့တုန်းကတော့ အပြောခံရတာများပြီး ဘေးထိုင်ဘုပြောတွေများလို့ Facebook မှာကို မတင်ပဲ Instagram မှာပဲ တင်ခဲ့တာပါ။ ဓါတ်ပုံထဲက လူတွေကတော့ ဘယ်သူမှ တင်မယ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အမှတ်တရ ဖြစ်အောင် တင်တာပါ။ View this post on Instagram #milestone for Myanmar Unicode #myanmar_unicode_area A post shared by Htet Wai Aung (@phoehtt) on Jul 31, 2016 at 9:41am PDT ခုပြန်ကြည့်တော့ ၂၀၁၆ က ဆွဲတဲ့ plan က ၂၀၁၉ မှာ အကောင်အထည်ပေါ်တယ် ဆိုတော့ ဆိုးတေ
By Htet Wai Aung - February 10, 2020
ထုံးစံလိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်း ၂၀၂၀ နှစ်အစမှာ ရန်ကုန် ကို ပြန်ရောက်လာတယ်။ ရန်ကုန်ဟာ အရင်ကထက်ပိုပြီး ဖုန်ထူလာတယ်။ လေထုညစ်ညမ်းမှု့ပိုများလာတယ်။ ရောက်ကတည်းက ဘယ်သူ့မှ အသိမပေးပဲ တိတ်တိတ်လေးနေနေတာတောင် ဘာတွေအလုပ်ရှုပ်လို့ ရှုပ်မှန်းမသိ။ (ဒီ post တောင် မနည်းရေးယူရတာ၊ Window ကနေ MacOS ကို ပြောင်းသုံးတာ အရင်သုံးနေကျ waitzar keyboard မရှိတော့ စာရိုက်ရတာ အတော်တိုင်ပတ်နေတယ်) ကင်မရာလည်း မကိုင်တာ အတော်ကြာပြီမို့ ပြန်ကိုင်ကြည့်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ လူကလည်း ရန်ကုန် ပြန်ရောက်မှပဲ အိပ်ရေးမဝ အစား မမှန်နဲ့ အတော် တိုင်ပတ်သွားတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ Sunday မှာ ရန်ကုန်မြို့ထဲ လျှောက်သွားရင်း ဓါတ်ပုံရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ ဒီအချိန်မှာတွေးမိလိုက်တာက lens အများကြီး မလိုဘူးဆိုတာပဲ။ ‌အခု ဘာကို သဘောကျနေလဲဆိုတော့ ef-m 22 mm လေးကို အတော်သဘောတွေ့နေတာ။ ဘာရိုက်ရိုက် သူလေးနဲ့ အတော်ကို အလုပ်ဖြစ်တယ်။ Bokeh လေးလည်း အတော်လှတယ်။ သယ်ရပြုရလည်း အနေတော်လေးပဲ။ STM လည်းပါတော့ auto focus အတွက် သိပ်ပြီး စိတ်ပူစရာမလိုဘူး။ နောက်ခါတွေ ခရီးထွက်ရင် ဒါလေးပဲ ယူသွားတော့မယ်လို့ စိတ်ကူးထားတာပဲ။ အရင်တုန်းက auto focus မလိုပါဘူး ဆိုပြီး တွေးခဲ့ဖူးသေးတယ်။ တကယ်
By Htet Wai Aung - February 06, 2020
Open Terminal and type sudo nano /private/etc/hosts and press Return add these to host file 127.0.0.1 www.sublimetext.com 127.0.0.1 sublimetext.com 127.0.0.1 sublimehq.com 127.0.0.1 license.sublimehq.com 127.0.0.1 45.55.255.55 127.0.0.1 45.55.41.223 0.0.0.0 license.sublimehq.com 0.0.0.0 45.55.255.55 0.0.0.0 45.55.41.223 and press control O to save and press return. Open sublime text and Enter Lincence Copy and paste this lincence key ----- BEGIN LICENSE ----- Member J2TeaM Single User License EA7E-1011316 D7DA350E 1B8B0760 972F8B60 F3E64036 B9B4E234 F356F38F 0AD1E3B7 0E9C5FAD FA0A2ABE 25F65BD8 D51458E5 3923CE80 87428428 79079A01 AA69F319 A1AF29A4 A684C2DC 0B1583D4 19CBD290 217618CD 5653E0A0 BACE3948 BB2EE45E 422D2C87 DD9AF44B 99C49590 D2DBDEE1 75860FD2 8C8BB2AD B2ECE5A4 EFC08AF2 25A9B864 ------ END LICENSE ------ and press return And VOLA. I tested on sublime text 3211 on MacOS Catalina.